कोरोना बीचको समुदाय २ - निष्पक्षखबर
कोरोना बीचको समुदाय २
आफ्नो जीवन नै आफैँ अन्त्य गर्ने रहर कसैलाई पनि हुँदैन । मीठो खाने र राम्रो लाउने अनि आरामदायी जीवन बिताउने जो कोहीको सपना हुन्छ । कतिपयले त्यो पूरा गरिरहेका हुन्छ्न अनि कतिपयको पूरा भएको हुदैन । त्यही सपना पूरा गर्न धेरै सङ्घर्षको सामना गरिरहेका हुन्छन धेरै मानिसले । तर पनि आफूले सोचेजस्तो नभएपछि जीवनबाट हार खाएका पनि हुन्छन् ।
कतिपय मानिसले कसैको बाध्यताले जीवन जिउनुपरेको पनि देखिएको छ । समस्यासँग जुध्न नसकेर आत्महत्याको बाटो पनि रोज्ने गरेका छन् । धेरैले अझै सङ्घर्ष गरिरहेका छन् जीवन जिउनुमा ।
धेरै होशियारीपूर्वक चालक दीपले बस चलाइरहेको थियो । एउटा सानो घुम्ती । अनि घुम्ती सकिनेबित्तिकै सानो बजार । बाटोको छेउमै एक जना बुढी आमै त्यत्तिकै टोलाएर उभिइरहनुभएको दीपले देख्छ । बजार पनि शुरु भएकाले गर्दा कम गतिमा बसलाई अगाडि बढाइरहन्छ दीपले । एक्कासी बस रोकिँदा सबै यात्रु अगाडि हुत्तिएर ठूलो चिच्याहटका साथमा चालकलाई कराउन थाले ।
“के गरेर बस कुदाएको ?’’
“हामी सबैलाई मार्ने विचार छ कि क्या हो ?“
“बस रोक्न पनि आउँदैन ?“
यस्ता शब्दले दीप जवाफविहीन हुन्छ र बसलाई पुरै साइड लगाएर बाहिर निस्किन्छ ।
अनि आफ्नो बसको टायरको छेवैबाट एक जना बुढी आमैलाई उठाउँदै बाहिर निकाल्छ । जो चाहिँ केहीबेर अघिसम्म बाटोको छेउमा उभिइरहेकी थिइन् । एकैचोटि आफ्नो बस अगाडि आएपछि उनलाई बचाउन अकस्मात ब्रेक लगाउँदा यात्रुहरु अगाडि हुत्तिएका थिए । ती आमैलाई केही पनि भएको थिएन ।
“बस आएको देखिरहँदा पनि किन अगाडि आउनुभएको आमा ? ब्रेक लगाउन अलिकति ढिला भएको भए आज तपाईं यो दुनियाँबाट टाढा भइसक्नुहुन्थ्यो । अनि मलाई नि जेल सजाय हुने थियो,’ दीप बोल्छ ।
“म के गरौँ बाबू ! दुई जना नातिनातिनी छोडेर पर्देश गएको छोरो सात वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म आएको छैन । बुहारीले नि घर छोडेर हिँडेको तीन साल भइसको । उनीहरु कहाँ छन् के गर्दैछन् अहिलेसम्म केही अत्तोपत्तो छैन । म बुढी मान्छेले ती नातिनातिनीलाई कसरी हुर्काउनु बाबू । अनि पोहोर पनि खोइ कुन्नि कुन रोग आयो भन्दै सबै बन्द गरे । अन्त कतै गएर काम गरिखान नि पाइएन । अलिअलि रिनपान गर्दै छाक टारेको थिएँ । अब फेरि बन्द गर्ने भन्दै गाउँभरी हल्ला छ । अब म बुढीलाई कसले रिन दिन्छ ? आफ्नो जग्गाजमिन केही पनि छैन बाबू । हरेक दिन अर्काकोमा बनिबुतो गर्दै छाक टारिरहेको थिएँ । अब बन्द भएपछि मैले के खानु अनि ती नातिनातिनीलाई के खुवाउनु, के लगाउनु ?’’ गहभरी आँसु पार्दै बुढी आमै बोल्छिन् ।
“अनि आमा यसरी कुदिरहेको बसमा सिधै आउन हुन्छ त ? मरिन्छ नि !’’ दीप बोल्छ ।
“मरिन्छ भनेर नै बस अगाडि ग’कि हो बाबू । पैसा पाइन्छ रे बसले मार्दा भन्ने सुनेको थिएँ । म बुढी मरे पनि मेरा नातिनातिनीले त पैसा पाउँछन् नि । अनि आनन्दले खान र लाउन त पाउँछन् । म बुढी मरेर के नै हुन्छ र बाबु ?’’ बुढी आमाको यो कुरा सुनेर दीप नाजवाफ हुँदै आफ्नो बस लिएर जान्छ । यात्रुहरुको नि आँखाभरी आँशु हुन्छ ।
(थाहा छ देशमा आपत आएको छ अनि महामारीले सबैलाइ डर देखाएको छ । रोग लागेर मरिन्छ कि भन्ने डर हामी सबैमा छ । अनि हामी सबै जना सबै कुराले भरिपूर्ण भएर बसेका पनि त छैनौँ । धेरै कुराको अभाव, धेरैलाई छ । सरकारबाट केही कुराको आश नहुने भन्ने पनि छँदैछ । ती बुढी आमै मात्रैमा होइन यस्तो घटना धेरै नेपालीमा आउन सक्छ ।)
बहराइनमा २ लाख र थाइल्याण्डमा १ लाख नाघे संक्रमित
‘ताउ ते’ नामको चक्रवात अरब सागरबाट आउँदै, नेपालमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने